Otu esi etinye ma jiri ClamAV na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
July 26, 2021 July 24, 2021 by Jọshụa James
Na-emelite Database Virus ClamAV
ClamAV bụ ngwa ngwanrọ na-emepe emepe na nke efu nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ụdị ngwanrọ ọjọọ, gụnyere nje, trojans, malware, adware, rootkits na ihe egwu ọjọọ ndị ọzọ. Otu n'ime isi ihe eji ClamAV eme ihe bụ na sava mail dị ka ihe nyocha nje virus nke ihe nkesa ma ọ bụ jiri ya na sava nnabata faịlụ na-enyocha kwa oge iji jide n'aka na faịlụ dị ọcha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọha mmadụ nwere ike bulite na sava ahụ. ClamAV na-akwado ọtụtụ ụdị faịlụ (akwụkwọ, executable, ma ọ bụ Archives), na-eji njirimara nyocha ọtụtụ eriri, ma na-enweta mmelite maka nchekwa data mbinye aka ya kwa ụbọchị ruo mgbe ụfọdụ ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị maka nchebe kachasị ọhụrụ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi ahazi ClamAV na Ubuntu 20.04 LTS. Otu ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ maka ụdị ọhụrụ Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo).
Lelee ma kwalite sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị na mbụ site na iwu a:
ClamAV na-abịa na ebe nchekwa ndabere Ubuntu, nke na-emekarị ka ọ dị ọhụrụ, nyere ClamAV bụ ngwaahịa nchekwa. Ubuntu na-eme mmelite n'oge oge, ọbụlagodi na mwepụta LTS dị ka 20.04.
Iji tinye ClamAV site na ebe nchekwa APT, mebie iwu a:
Mbụ, ịkwesịrị ịkwụsị (clamav-freshclam) ọrụ tupu ị nwee ike imelite. Iji mee nke a, pịnye iwu a:
Mara, hụ na i meela ma ọ bụ gbanyụọ ClamAV na buut. Ị ga-achọkarị ka enyere nke a aka; Otú ọ dị, ịnwere ike ịnwe nke a nwere nkwarụ na-akpaghị aka maka sistemu nwere oke akụrụngwa yana ma ọ bụ chọrọ iji aka mee ya n'oge na-adịghị mma mgbe ịchọrọ ịme nyocha akwụkwọ ntuziaka.
Iji wepu ClamAV na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị bụ usoro ngwa ngwa. Mezuo iwu ọnụ ọnụ iji wepụ:
sudo apt remove clamav clamav-daemon -y
ClamAV n'oge nyocha nwere ike ịdị oke ike nke CPU, sistemụ na-arụ ọrụ na ngwaike nwere oke ma ọ bụ nke ochie nwere ike ịchọta usoro ịtụ ụtụ na sistemụ ha. Ụzọ dị mfe bụ ịmachi (CPU) n'oge nyocha bụ iji (mma) iwu n'ihu iwu ClamAV ọ bụla.
Ị mụtala otu esi etinye, melite na iji ihe atụ ClamAV na nkesa Ubuntu 20.04 gị na nkuzi na-esonụ. N'ozuzu, ClamAV bụ nnukwu nyocha nje. Ọ bụ nke kacha mma? Ọfọn, nke ahụ bụ ruo arụmụka mgbe nile na ngwaahịa ndị ọzọ na-ebili ma na-ada; Otú ọ dị, ClamAV bụ mgbe niile n'elu 1 ruo 3 n'ime ọtụtụ akwụkwọ ndị mmadụ na ọ bụ mgbalị siri ike iji nyere aka chebe sistemụ arụmọrụ gị na email na ma ọ bụ sava weebụ site na nje, malware na ihe egwu ndị ọzọ.
Biko mara, n'agbanyeghị ụdị sọftụwia antivirus ndị a dị maka iji n'efu na sistemụ gị, o kwesịghị inye gị echiche nke nchekwa dị ka ijide n'aka na sava weebụ ma ọ bụ desktọpụ gị siri ike site na usoro dị mma ga-akacha zọpụta gị karịa. software ọ bụla nwere ike. Agbanyeghị, ClamAV bụ ngwa ọzọ dị na ngwa agha iji lụso iyi egwu na-eto eto nke cyber ransomware, malware na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eme usoro ahụ na mbụ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji ClamAV, ịga na onye ọrụ gọọmentị akwụkwọ.
Categories Ubuntu Tags ClamAV, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo